ShieldCoin စျေး - အွန်လိုင်း SHLD ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ShieldCoin (SHLD)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ShieldCoin (SHLD) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ShieldCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
SHLD – ShieldCoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ShieldCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ShieldCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ShieldCoinSHLD သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00005ShieldCoinSHLD သို့ ယူရိုEUR€0.00005ShieldCoinSHLD သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00004ShieldCoinSHLD သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00005ShieldCoinSHLD သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.000478ShieldCoinSHLD သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.000339ShieldCoinSHLD သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00119ShieldCoinSHLD သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0002ShieldCoinSHLD သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00007ShieldCoinSHLD သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00008ShieldCoinSHLD သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0012ShieldCoinSHLD သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.000417ShieldCoinSHLD သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.000293ShieldCoinSHLD သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.00403ShieldCoinSHLD သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.00906ShieldCoinSHLD သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00007ShieldCoinSHLD သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00008ShieldCoinSHLD သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00167ShieldCoinSHLD သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.000374ShieldCoinSHLD သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.00576ShieldCoinSHLD သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.0638ShieldCoinSHLD သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0208ShieldCoinSHLD သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.00396ShieldCoinSHLD သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00148
ShieldCoinSHLD သို့ BitcoinBTC0.000000005 ShieldCoinSHLD သို့ EthereumETH0.0000001 ShieldCoinSHLD သို့ LitecoinLTC0.000001 ShieldCoinSHLD သို့ DigitalCashDASH0.0000006 ShieldCoinSHLD သို့ MoneroXMR0.0000006 ShieldCoinSHLD သို့ NxtNXT0.0042 ShieldCoinSHLD သို့ Ethereum ClassicETC0.000008 ShieldCoinSHLD သို့ DogecoinDOGE0.0155 ShieldCoinSHLD သို့ ZCashZEC0.0000007 ShieldCoinSHLD သို့ BitsharesBTS0.00166 ShieldCoinSHLD သို့ DigiByteDGB0.00172 ShieldCoinSHLD သို့ RippleXRP0.000191 ShieldCoinSHLD သို့ BitcoinDarkBTCD0.000002 ShieldCoinSHLD သို့ PeerCoinPPC0.000179 ShieldCoinSHLD သို့ CraigsCoinCRAIG0.0245 ShieldCoinSHLD သို့ BitstakeXBS0.0023 ShieldCoinSHLD သို့ PayCoinXPY0.00094 ShieldCoinSHLD သို့ ProsperCoinPRC0.00675 ShieldCoinSHLD သို့ YbCoinYBC0.00000003 ShieldCoinSHLD သို့ DarkKushDANK0.0173 ShieldCoinSHLD သို့ GiveCoinGIVE0.117 ShieldCoinSHLD သို့ KoboCoinKOBO0.0123 ShieldCoinSHLD သို့ DarkTokenDT0.00005 ShieldCoinSHLD သို့ CETUS CoinCETI0.155
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 13 Aug 2020 12:00:02 +0000.